दाँत खप्टिएका मानिसहरु यसकारण भाग्यमानी - Nepali in Australia
June 29, 2021 autherLeaveaComment on दाँत खप्टिएका मानिसहरु यसकारण भाग्यमानी
संसारमा हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि हरेक मानिसको शरीरिक बनावट फरक फरक नै हुन्छ । फरक–फरक बनावट र संकेतले व्यक्तिको विशेषताबारे हामीलाई बताइरहेको हुन्छ । विशेष गरी समुद्रशास्त्रले यस्ता कुराको विशेषता बताएको हुन्छ । शास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका यी संकेतहरुले तपाईको बारेमा निम्न कुराहरु बताउने गर्दछन ।
१.दाँतमाथि दाँत खप्टिनुःसमुद्रशास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको दाँतमाथि दाँत खप्टिएको हुन्छ उनीहरु निकै नै भाग्यमानी हुन्छन् । यसका साथै यस्ता व्यक्ति असल र मित्रहरुलाई सधैँ साथ दिने नै खालका हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो भाग्यको साथले नै अघि बढीरहेका हुन्छन् ।
२. छवटा औँलाःसामान्यतः हरेक मान्छेको हात र खुट्टामा पाँच–पाँच वटा औँला रहेका हुन्छन । तर संसारमा यस्ता मान्छे पनि हुन्छन् जसको कुनै हात वा खुट्टामा ६ वटा औँला रहेको हुन्छ । ६ वटा औँला भएका मानिस अत्यन्तै भाग्यमानी हुन्छन् भन्ने कुरा समुन्द्रशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता व्यक्ति अत्यन्तै इमान्दार र हरेक कामलाई आफ्नो कामको रुपमा ग्रहण समेत गर्छन् । यस्तै यिनीहरुले आफ्नो कामबाट प्रसिद्धि पनि कमाउने गर्छन ।
३.दाँतको बीच खाली ठाउँःदाँतको बीचमा खाली ठाउँ भएका व्यक्तिहरु आर्थिक क्षेत्रका विषयमा निर्णय लिन निकै नै सक्षम हुन्छन् । समुद्रशास्त्रअनुसार यस्ता व्यक्तिहरु गफाडी पनि सार्है नै हुन्छन् र कुरा बनाउन कहिल्यै पनि थाक्दैनन् । यस्ता व्यक्तिहरु भाग्यशाली हुन्छन् । भनिन्छ कि जसको अगाडिको दाँत बीचमा खाली ठाउँ हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु पैसादेखि लिएर करिअरसम्मको कुरामा निकै नै भाग्यशाली साबित हुन्छन् ।
४.पुरुषको छातीमा रौँःयस्ता पुरुषहरु शान्त र सरल स्वभावका हुन्छन् भने छातीमा रौँ भएका पुरुष धनाढ्य पनि हुन्छन् भन्ने बिश्वास रहिआएको छ। जसले गर्दा यिनीहरुको जीवनमा कहिल्यै धनको कमी हुँदैन भन्ने कथन रहेको छ ।
बिहेको दिनमा सुनका गहना र लुगा लगाएर ठिक्क परेकी बेहुली ब्युटी पार्लर जान्छु भनेर फरार, अंकल भनेर चिनाएका मान्छे पनि नक्कली (भिडियो हेर्नुस्)
निमोनियाले ज्यानै जान सक्छ, यी हुन निमोनियाका लक्षणहरू , कुन अवस्थामा डाक्टरको सम्पर्कमा जाने त?
हरियो केराउ खानुका यस्ता छन् फाइदाहरु ! जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ ? एकचोटी अबस्य पढ्नुहोला
यसरी पाउन सकिन्छ बिना धितो मात्र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख ऋण, लिनुहोस् मौकाको फाइदा !